Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu) #0; Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu) #443
Izimfihlakalo Zezulu #443
443. Empilweni yangemuva kokufa umuntu uphiwa amandla okubona nokwazi ngokuchachile ukuthi eminye imimoya yayinayiphi imiqondo isaphila emhlabeni malungana nomphefumulo, nomumoya, nangempilo yangemuva kokufa; ngokuba uma imimoya igcinwa esimweni esifana neyayikuso isesemzimbeni wemvelo, imi-cabango yayo ifuza imicabango eyayinayo emzimbeni wemvelo, nomcabango wayo uba sobala sengathi uya-menyezwa. Ngolunye usuku, ngabona komunye umuntu owayesanda kufa, okuyinto naye ayiqinisa, ukuthi imbala esesemzimbeni wemvelo wayekholwa ukuthi umumoya ukhona, kodwa wayecabanga ukuthi lowomumoya wawunempilo efiphele ngemuva kokufa. Isizathu sokucabanga kanjalo kwabe kungukuthi uma impilo yomzimba wemvelo ihoxiswa, kakusali lutho ngaphandle kwempilo efiphele nelufikifiki; ngokuba wayethatha umzimba wemvelo njengomnini wempilo, ngakhoke umqondo wakhe womumoya kwakuwumqondo wento engekho; futhi wazigxilisa kulomqondo ngenxa yokubona ukuthi nezilwane zinempilo ecishe ifana neyomuntu. Manjeke waye-mangaliswa wukuthi imimoya nezingelosi zihlala ekukhanyeni okwedlulele, enkaliphweni, enhlakaniphweni, nasen-jabulweni okwedlulele, okuhambisana nokubona noqonda okwedlulele nokuphelele kangangoba awekho amaga-ma aneleyo okukuchaza. Ngakhoke iqiniso elimsulwa wukuthi impilo yemimoya nezingelosi kayifiphele nakancane, kepha iyakhanya futhi ichache ngokwedlulele.